Gabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti
Gabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti duulchisaa jirtu hidhannoon hiikkachiisa kan jedhuun diraamaatti jiraachuun isaanii beekame.Akka odeessi qabatamaan ifa godhutti waraanni liyyuu haayil hidhannoo fi meeshaa waraanaa qabu yeroon akka karaa irraa maqsatan ykn akka dhokfatan lafa jalaan karaa ajajoota waraana wayyaanee wayyaanee/TPLFn qajeelfamni/ajaji darbeefii jira.
Sanas ta’e kana ummatni keenya shira wayyaanee kamiifuu osoo hin saaxilamin, liyyuu haayil hiikkachiistes dhiistes, of eeggannoon akka naannoo fi qabeenya isaa haga danda’e tikfatu, hidhannoo qabu akka jabeeffatuu fi yo danda’es hidhannoo akka qabaatuu qabu sabboontotni dhaamsa dabarsanii jiran.
Qamadiif Garbuun ingirdaada, Daagujjaan Gargaaraa, Bisingaan Siphoo akka qabu namuu beeka. Akkasuma qabsoon Oromoo quucarsitoota qabsoof gantuu qabaachuu addaan baasee beekuun dirqama dhalootaati. Qabsoon uummata tokkoo dhaloota oladeemaa yoo qabaate egeree qaba. Keessattuu qabsoo ga’eessonni deggaran irra, qabsoo dhalattoonni haaraan deggaran egeree jabaa qabaata.Hanga yeroon gahutti quucarsitoonni midhaanii olii kunneen midhaan faana aramamu. Gaafa aangi’an addaan dhiluun gaafa ga’u Maancidii(meeshaa qonnaa aramaaf itti gargaaraman) barbaadee qote bulaan ykn abbaan ardaa jara kanneen dhabama godha. Kana booda wantoonni midhaan sana xuuxan erga dhabamanii booda, midhaan gaariif midhaan guntuta ykn naqa tolu ta’u. Maancidiin qote bulaa Birraa aramaa midhaan fakkaatee guddate caraga.
“Hubaachiisaa qeerroo oromiyyaa maraf
OPDON qaajelfaama harawaa bastee jirtii
Innis Oromiyyaa keessaattii hiriirii yoo bahamee poliisoonii oromiyyaa akka tarkanfii fudhaatan fi qabanii akka hidhaan
2. Qeerroo fi uummaannii eyyamaa isàanittiin hiriiraa akkaa gageessaaniifi eyyaama isaanii maalee hiriirii akka hin gageefamnee
3. Hojjetoonnii motummaa hiriiraa keessaattii yoo argaamaniif otoo qeerroo kakaasa jiruu ykn uummataa waaliin maarii gaageessaa jiruu yoo argaamee hidhaa ciimaafii hoojiraa akka arii’atamuu murteessaanii jiruu
5. Qeerroo kanan duraa qindeesaa turaaniif qabsoo keessaattii qodaa olanoo qabana irraattii qoraanoo gaageefamee mana hidhaa akka gaalchaanniif xinxaala gaageessuu
6. Uummataa of cinaa hiriirsuun qeerroofi angoohotaa siyaasa baalalleefachuu akka tasiifamuu innis fareen nageenyaa jedhaanii ittin sobaanii farajuuf akka toluu sobaanii diramaa qopheessaa jiruu
Kanaf uummaanniifi qeerroon oromiyyaa keessaa jirtaan pooliisootaafi angoohotaa opdo irraa cimiinaan of eggadhaa iccittii keenyaa akkumaa kana duraa cimee eggamee deemuu qaba kanaaf qeerroon keenyaa oduu opdo dhaagahurraa of haa qusaanuu qabsoo keenyaa ittii fufaa tarsiimoon keenyaa yeroo gabaabaattii isiinif ibsiinaa
Kanaaf tarkaanfiin keenyaa innii jalqaaba opdo hundaa irraa eggaala
Qeerroo amboo irraa